Kuzonandisa noMaskandi emcimbini kaKhisimusi | News24
Kuzonandisa noMaskandi emcimbini kaKhisimusi
eThekwini - I-Mirror PR & Events izonyathela ngolunye unyawo emcimbini emibili kaKhisimusi, njengoba kuzobe kunandisa intandokazi kaMaskandi uKhuzani "Indlamlenze" Mpungose e-Albert Falls.
Le nkampani edume ngokuhlela ama-Crown Gospel Music Awards, ihlanganise lo mcimbi obizwa nge-Christmas Family Braai Day engoyokuqala kulo nyaka.
Kulindeleke ukuthi lomcimbu uhehe izinkulungwane zabantu abaqhamuka ezindaweni zahlukeni ezifuna ukuzithokozisa e-Albert Falls Dam (Bon Accord).
OLUNYE UDABA:BUKA: Umculi wakuleli ukhonjwe ngesibhamu emcimbini
Lo mcimbi ozothatha izinsuku ezimbili ngomhlaka 27 nangomhlaka 28 kwephezulu, unabanye abaculi bodumo abafana noDumi Mkokstad, uBetusile, Mpume Hlabisa noJumbo, osanda kuwina indondo ye-Best Song ngeculo elishisa izikhotha, Singenise.
Izihambeli azizukuthokozela umculo nje kuphela kodwa kukhona nezicoficofi, ukudla neziphuzo kanye nokunye okumnandi kokuzithokozisa.
Okhulumela lomcimbi, uZama Mkhize uthe: “Akuzukushukuma kuphela i-Albert Falls kodwa nezindawo ezakhelene nayo ngalezi zinsuku zombili. Imindeni nabangani bazothokozela umculo, ukudla nemidlalo yabantwana. Silindele izihambeli ezisuka ngisho koThekwni imbala. Labo abazobe bevakashile bezochitha amaholidi angeke bazisole”
Abafisa ukuba kulomcimbi bangazitholela amathikithi ngo-R120, eComputicket noma- esangweni. Abantwana abana-12 kuyaphansi bangena ngo- R50. Ama-cooler box (R150) nama-camp-chair kuvumelekile. Izindawo zokukhempa (camping facilities) ayatholakala, shayela u 0313033520 noma zama@mirrorpr.co.za
Ukudla neziphuzo kuzobe kukhona, kudayiswa. Uqala ngehora lesi- 12 emini.